ZIMBABWE: Diaspora can also discuss new constitution : Shout-Africa
Home » News » ZIMBABWE: Diaspora can also discuss new constitution
ZIMBABWE: Diaspora can also discuss new constitution
HARARE, 17 August 2010 (IRIN) – The parliamentary committee in charge of reviewing Zimbabwe’s constitution is actively inviting feedback and recommendations from the millions of Zimbabweans living abroad.
“Our resources could not permit us to travel all over the world to solicit the views of Zimbabweans on the contents of the draft constitution; this meant that we could only conduct outreach programmes in Zimbabwe,” a co-chair of the Select Committee of Parliament on the New Constitution, Edward Mkhosi, told IRIN.
“The launching of a website is a wonderful opportunity for Zimbabweans all over the world to contribute on how they want their country to be governed,” said Mkhosi, who represents a smaller formation of the Movement for Democratic Change (MDC) led by Arthur Mutambara.
“That is quite a significant part of the population which would need to be consulted, as they may have issues that are relevant to them – some of the issues that could be peculiar to them may have to do with dual citizenship and the right to vote,” he said.
A new constitution is one of the requirements stipulated by the Global Political Agreement, signed in September 2008 between Zimbabwe’s three main political parties.
Paul Mangwana, representing President Robert Mugabe’s ZANU-PF party, commented that “the website was designed primarily for Zimbabweans in the diaspora … they should be able to say what kind of country they want to come back to.”
Estimates of the number of Zimbabweans living abroad range between 3 million and 5 million, and their remittances are widely credited for softening the impact of the country’s economic collapse.
Admore Tshuma, a Zimbabwean journalist based in the United Kingdom, welcomed the decision to include expatriates “because it is the same diaspora who, during the height of near economic collapse of Zimbabwe, chipped in and re-oiled the wheels of Zimbabwe’s economy”.
Interested Zimbabweans around the world can join the discussion here: http://www.copac.org.zw/